Announcement | ALARM Myanmar
Black Water in Karen State: People’s Life in Poisoned Environment
"ကရင်ပြည်နယ်မှ ရေမည်းများ၊ အဆိပ်သင့် ဝန်းကျင်မှ ပြည်သူ့ဘ၀များ" မြိုင်ကလေးဘိလပ်မြေစက်ရုံကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဘဝအပေါ် ထိခိုက်မှုများအား လေ့လာဆန်း စစ်ချက် အစီရင်ခံစာမိတ်ဆက်ခြင်းကို ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၁) ရက်(မနက်ဖြန်)၊ နေ့လည် (၀၁:၀၀) နာရီမှ (၀၃:၀၀) နာရီ အထိ...
Announcement: Informing ALAMR’s HQ Lock-Down
Dear Our Partners, We would like to officially inform that ALARM office is on lock-down because one of our staffs (came back from “Land Right Training” in Mon State recently) found COVID-19 positive even though we tried our best to comply with all necessary...
Announcement: ShweLi River’s Color Changing Test Report
ရွှေလီမြစ်ရေအရောင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်သောစမ်းသပ်တွေ့ရှိမူကြေညာချက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှစတင်ကာ မူဆယ်မြို့အနီး ရွှေလီမြစ်ရေ အရောင်ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပွား လျက်ရှိသည်ဟုကြားသိရသဖြင့် စိမ်းလန်းအမိမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းသည် မူဆယ်မြို့ ဒေသခံ...
Announcement of Office Relocating
ရုံးလိပ်စာ ပြောင်းရွှေ့ကြောင်း ကြေငြာချက် မင်္ဂလာပါ။ စိမ်းလန်းအမိမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းရုံးချုပ် နှင့် ဓါတ်ခွဲခန်း တည်နေရာကို A-2၊ ကန်လမ်း၊ လှိုင်မြိုနယ်၊ ရန်ကုန်မြို့မှ အမှတ် (၅၃၁-D)မာလာမြိုင်ရိပ်သာလမ်း၊ (၈)ရက်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ သို့...
ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း အသိပေးခြင်း လက်ရှိအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများအပြားတွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ကူးစက်မြန်ကပ်ရောဂါ Covid 19 ကူးစက်မှုမှကာကွယ်နိုင်ရေး အစိုးရဘက်မှလည်း အစွမ်းကုန်ပြင်ဆင် ထားသကဲ့သို့၊ ပြည်သူများအားလည်း...